အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကို ကူညီနိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် UNA အဖွဲ့ဝင်များ ရခ?? - Yangon Media Group
အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကို ကူညီနိုင်ရန် နည်း လမ်းရှာလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် UNA အဖွဲ့ဝင်များ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် စတင်ကွင်းဆင်း လေ့လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း SNLD တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၂)က ပြောသည်။ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား များ မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ပါတီ ၁၅ ပါတီအနက် ၁ဝ ပါတီမှ ကိုယ်စား လှယ်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းသို့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ စစ်တွေမြို့မှ တစ်ဆင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်ဒေသများသို့ ကွင်း ဆင်းလေ့လာလျက်ရှိပြီး ဒုက္ခသည် များ၏လက်ရှိအခြေအနေ၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ် စဉ် စတင်ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်း အရင်း စသည်တို့ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း UNA အဖွဲ့ဝင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့် ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေး မှူး (၂) ဦးစိုင်းလိတ်က ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ ပြောသည်။
ကွင်းဆင်းလေ့လာသည့် ပထမ နေ့တွင် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများနှင့် ကျေးရွာ များကို စတင်လေ့လာနေခြင်းဖြစ်ပြီး လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားရောင်မခွဲ ခြားဘဲ ဒုက္ခသည်အားလုံး၏အခက် အခဲကို လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး၊ အသား ရောင်၊ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ၊ ကျား/မ မခွဲခြားဘဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ ဟာဘာကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြ လဲဆိုတာကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိချင်တာ။ အဲဒီလိုသိပြီးတော့မှ အစိုးရနဲ့သော် လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်နဲ့သော် လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ရေးပါတီများက ဘယလိုကူညီနိုင် မလဲ၊ ဘယ်လိုလက်တွဲဆောင်ရွက် နိုင်မလဲဆိုတာကို နည်းလမ်းရှာဖို့ ကွင်းဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးစိုင်းလိတ်က ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ စာမျက်နှာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံ့ပုံ ရိပ်ကျဆင်းနေပြီး နိုင်ငံတကာ၏ စွပ်စွဲချက်များအား ပကတိအခြေ အနေနှင့် နိုင်းယှဉ်လေ့လာသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ UNA အဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့ညပိုင်း က ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းခဲ့ ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကကွင်းဆင်းလေ့လာရာတွင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးအချို့ကို ¤င်းတို့နှင့်အတူထည့် ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအ ရေးကို ရခိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု မယူဆကြဘဲ တိုင်း ရင်းသားမျိုးနွယ်စုအားလုံး ပြဿနာ ဟုမှတ်ယူကာ နိုင်ငံတကာကို ပြန် လည် ရင်ဆိုင်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပြီး အားလုံးညီညွတ်ကြရန်လည်း ၎င်းက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ”ဒီပြဿနာပေါ်မှာ သင်ခန်းစာ ယူပြီးတော့ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုပဲ ထိခိုက် ထိခိုက် ကျွန်တော်တို့တိုင်း ရင်းသားတွေ အချင်းချင်းလက်တွဲ မညီရင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန် တကယ် မတည်ဆောက်နိုင်ရင်၊ စစ် မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို မချီ တက်နိုင်ရင် အလားတူပြဿနာမျိုး ဟာ ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အတူ တကွရယူဖို့၊ တန်းတူညီမျှခြင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုင်ရာကို အာ မခံနိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးမြန်မြန် တည်ဆောက်ဖို့လိုပြီ”ဟု ဦးစိုင်း လိတ်ကပြောသည်။ လက်ရှိကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဝန် ကြီး၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးတို့လိုက်ပါ ပို့ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ ကလည်း လုံခြုံရေးပေးထားကြောင်း သိရသည်။
UNA အဖွဲ့ပါတီဖြစ်သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းညွန့်လွင် က”ကျွန်တော်တို့ UNA အဖွဲ့ မှာ ကရင်၊ မွန်စသဖြင့်ပါတယ်။ လာတဲ့ ကိစ္စဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်သားတွေနဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ သတင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင် တွေရဲ့ဒုက္ခသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုယူဆပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့လာရခြင်းဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် အောက် တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် ကျောက်တော် နှင့် မြောက်ဦးဒေသသို့ သွားရောက် ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ UNA အဖွဲ့ဝင်ပါတီ ၁၅ ခု အနက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ရခိုင်ဒီမိုက ရေစီပါတီ၊ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ၊ မရို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ၊ မွန်အ မျိုးသားပါတီ၊ ကယန်းအမျိုးသားပါ တီ၊ ကရင်အမျိုးသားပါတီ၊ ရှမ်းနီ (တလိုင်း) နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီ၊ ဓနုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ နှင့် ခူမီးအမျိုးသားပါတီတို့မှ ကိုယ် စားလှယ် ၂ဝ ကျော်ဖြင့် ကွင်းဆင်း လေ့လာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ရိုက်ကူး ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဇာတိမြေရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ အမှတ်တရတွေ အကြောင်း ပြောပြ??